यो महामारीमा बेचैनीबाट बच्ने उपाय
डा. सुदर्शन नरसिंह प्रधान
यतिबेला आफ्नो सुरक्षाका लागि घरभित्रै बस्नु परेको छ । सबैजसो अफिस र बालबालिकाका स्कुल बन्द छन् । अहिले खाने र बस्नेमात्रै भइरहेको छ । त्यसमा पनि कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्छ कि भन्ने त्रासका कारण मानिसमा निद्रा नलाग्ने, छटपटी हुने, बेचैनी हुने, दिक्दारी लाग्ने, झस्किने, खानामा रुचि नहुने, मुटुको चाल बढ्ने, मुख सुक्खा हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । सोच्दै नसोचेको कुरा अकस्मात् हुँदा यस्ता समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । दिमाग खाली हुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ
मलाई कोरोना लाग्यो भने वा परिवारमा कसैलाई लाग्यो भने के होला भन्ने चिन्ताले धेरै मानिस ग्रस्त छन् । यसले गर्दा शरीर चिसो हुने, कहा जाऊँ–के गरुँ हुने भएको छ । कतिपयमा रुघाखोकी लाग्दा र जीउ दुख्दा पनि मलाई कोरोना भयो कि भन्ने त्रास पैदा भइरहेको छ । भूकम्पका बेला पनि धेरै मानिसमा यस्ता समस्या देखिएको थियो । कतिले अधिक मात्रामा हात धोएका कारण हात फुटेर छाला रातो भएर पनि तनाव भइरहेको हुन सक्छ । तर यस्ता समस्या समयसगै बिस्तारै ठीक हुदै जान्छन् ।
यस समय आफ्नो मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । टेलिभिजन तथा मोबाइलमा कोरोनासम्बन्धी समाचार मात्र हेर्नुहुँदैन । भ्रम फैलाउने खालका अनलाइन हेर्नुभन्दा पनि आधिकारिक सूचना दिने स्रोत खोज्नुपर्छ । मन परेका फिल्म हेरेर आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ । नया परिकार बनाउन सकिन्छ । लुडो वा क्यारमबोर्ड खेल्न सकिन्छ । संगीतमा रुचि भए नाचगान गर्न सकिन्छ । कुनै न कुनै काम गरेर आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ ।
अहिले परिवारसँग समय बिताउने राम्रो मौका पनि हो । परिवारसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ । ध्यान व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ । यसले आत्मसन्तुष्टि हुनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ ।
सुत्ने समयतालिका एउटै बनाउनपर्छ । सुत्ने बेलामा चिया पिउनुहुँदैन । निद्रा लागेन भनेर मोबाइल चलाउनुहुँदैन । यसो गर्दा झन निद्रा लाग्दैन । हातखुट्टा राम्ररी धोएर खुकुला पहिरन लगाएर सुत्नुपर्छ । लामो लामो सास फेरेर सुतेमा पनि निद्रा छिटो पर्छ । युट्युब च्यानल हेरेर बिहानको समयमा व्यायाम गर्न सकिन्छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि सजगता र सुरक्षा अपनाउनुपर्छ । घरबाट बाहिर निस्कनुहुँदैन ।
(प्रा. डा. सुदर्शन नरसिंह प्रधान काठमाडौं मेडिकल कलेज मनोचिकित्सा विभागका विभागीय प्रमुख हुन् )